Website ရေးနည်း HTML+CSS (အပိုင်း ၆)
Website ရေးနညျး HTML+CSS (အပိုငျး ၆)
မင်ျဂလာပါ …ဒီတဈပိုငျးကတော့ website ရေးခွငျးရဲ့ နောကျဆုံး အပိုငျးဖွဈပါတယျ၊ ကြှနျတျော တငျပေးထားတဲ့ သငျခနျးစာတှကေို တောကျလြှောကျ လိုကျလုပျတဲ့လူဆိုရငျတော့ အခု သငျခနျးစာ ပွီးရငျ website တဈခုကို ရေးတတျမှာ သခြောပါတယျ။ ဒီ post အခုမှတှတေဲ့လူတှအေတှကျလညျး အရငျသငျခနျးစာတှကေို ပွနျညှနျးပေးပါ့မယျ။
အပိုငျး (၁) — Analyzingawebsite (ဝဘျဆိုကျ တဈခုကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာခွငျး)
အပိုငျး (၂) — Coding header of Myanmar Web Designer
အပိုငျး (၃) — Coding main menu of Myanmar Web Designer
အပိုငျး (၄) — Coding footer of Myanmar Web Designer
အပိုငျး (၅) — jQuery slider တဈခု ဖနျတီးခွငျး (CreateajQuery slider)
ဒီနေ့ video ကတော့ သုံးပိုငျးရှိပါတယျ၊ သုံးပိုငျး ဆိုလို့ လနျ့မသှားပါနဲ့ သုံးခုပေါငျးမှ ၂၇ မိနဈလောကျပဲ ရှိတာပါ၊ အဲဒီ video တှကေတော့ –
ဗီဒီယို အပိုငျး ၁
ဗီဒီယို အပိုငျး ၂
ဗီဒီယို အပိုငျး ၃
← Website ရေးနညျး HTML+CSS (အပိုငျး ၅) SEO beginner introduction | learn myanmar seo tutorials →
14 thoughts on “Website ရေးနညျး HTML+CSS (အပိုငျး ၆)”
အပိုင်း(၅)ကိုတော့သိပ်နားမလည်ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်ကခုမှစလေ့လာတာဆိုတော့ နဲနဲအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။ ရှေ့ပိုင်းတွေကတော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ အကို့ကိုလည်း ခုလိုတင်ပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
William Greatman says:
အင်း … အပိုင်း (၅) က jQuery အကြောင်း နည်းနည်းသိထားရင်တော့ ပိုနားလည်လွယ်မယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ သာမာန်လောက်ပဲ နားလည်မှာ။ စိတ်မပူပါနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နားလည်လာမှာပါ။ လေ့လာမှုကိုတော့ မရပ်လိုက်ပါနဲ့။
ဟုတ်ကဲ့အကို အခုလိုပြန်ပြောပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း အရမ်းတတ်ချင်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးလေ့လာနေပါတယ်ဗျာ။ အခုလိုသင်ပြပေးတဲ့ အကို့စေတနာကိုတော့လေးစားပါတယ်ဗျာ
ဆက်လက်ပို့ချပေးပါ အကိုရေ။ ကြိုးစားသင်ယူပါ့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်က အခုမှ ဒီ website Tutorial နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စတင်လေ့လာသူပါ။ တင်ခဲ့ကမျှတွေကို step by step လေ့လာချင်ပေမယ့် တစ်ချို့ သင်ခန်းစာတွေက 1၊2၊3 အစဉ်လိုက် ရှာမရဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် website link လေးနဲ့ပြန်ပြင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပေမယ့် အားနာနေပါတယ်။ ရှေ့ဆက်လည်း ဆက်လက်ပို့ချပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါဆရာ…….သင်ခန်းစာတွေအစအဆုံးကျွန်တော်ကြည့်လာတာအခုဆိုရင် ဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုတော့ရသွားပါပြီဆရာ….နောက်ပြီးအဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုdomain နဲ့ဘယ်လ်ိုအသုံးပြုပြီး download လင့်တွေဘယ်လိုချိတ်ရမလဲဆိုတာာမသိဘူးဆရာ…
website ရေးပီးရင် သူငယ်ချင်းတွေဝင်ကြည့်ရအောင် google ကိုဘယ်လိုတင်ရမှာလဲ
Htal War says:
ကျေးဇူးပါဗျာ အကို ဒီထက်ပိုပြီး တတ်သိနားလည် ဝေမျှပေးနိုင်ပါစေ….
ဲJame Khup says:
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အကို ဆရာ…အကုန် download လုပ်ပီး သင်ယူတယ်..
ခုလေ့ကျင့် နေတုန်းပါ… အကို ဆရာ သုံးသလို Codelobster ကို သုံးပါတယ်..အဲမှာ မြန်မာ Font မရဘူးဖြစ်နေတယ် …. အဲဒါလေး ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြလို့ရမလာ ခင်ဗျာ… ပီးတော့ အချိန်ရရင် menu bar
ထဲက home တို့ contact us .. about us အဲ link တွေ ကို ဘယ်လို ခွဲရေး ပြီး ဘယ်လို
ချိတ်ဆက်ပီး “#” ထဲကို ထည့်ရလဲ ဆိုတာလေး အကြမ်းဖင်း ထပ်သင်ပေးလို့ ရမလာ ခင်
Khin Myat Thu says:
ကို​ယ့်​computerထဲက pdf စာအုပ်​​တွေကိုwebsiteထဲမှာ ဘယ်​လိုထည့်​ရမှန်းမသိလို့ပါ ကူညီး​ပေးပါ
ဦးလူခါး ရှင့်​ websiteကိုအခုမှစ​ရေးတာပါသမီး တို့ projectပြ ရမှာ မို့ပါ ​ကျေးဇူးအရမ်းတင်​ပါတယ်​
ထည့်မယ့် website ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ wordpress ဆိုရင်တော့ Media ထဲမှာ Upload လုပ်ပြီး ပြန်ပြချင်တဲ့နေရာမှာ သာမာန်လင့်ချိတ်သလို ချိတ်ရုံပါပဲ။ Static Site ဆိုရင်တော့ file လမ်းကြောင်းအတိုင်း Link ချိတ်ပေးရုံပါပဲ။
Adobe xd နဲ့ web လုပျတာနဲ့ဘယျလိုကှာသှားမှာလညျးခငျဗြာ